musha nyika dzakabatana Vatambi veBasketball James Harden Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeAmerican Basketball Player inonyatsozivikanwa nezita rezita rezita “Ndebvu". Our James Harden Childhood Story plus Untold Biography Facts brings you a full account of notable events from his childhood time to date.
Hongu, munhu wose anoziva ye ndebvu dzake dzakakurumbira uye stellar play. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga James Harden's biography iyo iri inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
James Edward Harden akazvarwa musi we 26th weAugust 1969 kuBellflower muCalifornia, United States. Akazvarwa kuna amai vake Monja Wills uye kuna baba vake James Harden Sr (a Naval seaman panguva iyoyo).
Nezvemhuri yake, Harden ndeyeAmerica yenyika yeAfrica-America neAfro-America midzi.
Young Harden akakurira munzvimbo yakakurumbira yeComppton muCalifornia pamwechete nehanzvadzi yake yakakura Arnique Jelks nehafu yehama Akili Roberson.
Bhasika prodigy akapedza chikamu chikuru chehucheche hwake achikura asina baba baba sezvakaita James Harden Sr akapinda mumishonga uye akashandisa nguva yakawanda mujeri.
Saka Harden yakamutswa naamai vake avo vakatsvaka rubatsiro rwemitambo kuti vabatsire kuita zvaaifarira kubva pamabasa ezvakaipa izvo Compton aizivikanwa panguva iyoyo.
Akadaro Willis wemwanakomana wake sarudzo yekutanga yemitambo.
Mwana wechidiki akazorwa neBhikball makore mashomanana mushure mekunge atamba imwe yepaki uye yezorodhi muWatts iri pedyo. Zvakanyanya kuda kwake pamutambo waaitakura basketball zvakapoteredza sokunge yaiva basa rake.
Iye akazozivisa kubvuma kuzvipira kumutambo wacho, achifungidzira kuti ramangwana raive neiko mumutengo kwaari mumashoko akanyorwa kuna amai vake.
"Iwe unogona kusiya kwandiri madhora mashoma. PS Chengeta iyi pepa. ndichave nyeredzi. "
Akanyora Kurwisa muC9th grade.
Harden yekumashure nhoroondo inosanganisira dzidzo yake ku Artesia High School 'muLakewood, California.
Zvakanga zviri kuArizona State kuti Harden yakasimbiswa pachikoro chake chesekondari chinonyora nekukudza uko kunosanganisira kutumidzwa kunhengo yekutanga All-Pac-10, musangano wose-freshman team pamwe neboka rekutanga All-District neNABC ne USBWA.
Akaunza nguva yake yekutsvaga kusvika kumagumo nekuzivisa kuti 2009 NBA yakanyorwa uye yakasarudzwa neKinshasa City Thunder sezvo yechitatu yekusarudza. Kufambira mberi zvakasimba kusvika musi Harden inonzi inonzi imwe yevadzidzi vane ngozi nehuchenjeri hunobudirira muNBA.
Harden yave ichirwisana nevakadzi vanoverengeka kusanganisira mureza weTina, uye hukama hweAmerica, Amber Rose.
Harden inopikisa kuva neRipper Trina (kuruboshwe) uye hukama hweAmerica Amber Rose (kurudyi)
Nekudaro, iyo yakakosha nyaya yekudanana yaHarden inotanga kubva pahukama hwake naKhloé Kardashian kutanga kubva muzhizha re2015.
Hukama hwakazopedzisira hwave hwakawanda kupfuura hwaHarden hwaakatsvakira zvaakange akabatwa pakati pezvenhau kutarisisa izvo zvisina kuenda zvakanaka nehunhu hwake hwakataurisa. Ivo vaviri vakaidaidza kuti inopera mukutanga kwegore ra2016 naHarden achidzokera kugomba rake rekuvanzika uye Khloe achidhonzera tarisiro yaanoshuvira.
Iye basketball player parizvino ari kufambidzana nemukurumbira wenziyo weR & B, Ashanti. Shiri dzerudo dzakatanga kufambidzana muna Chivabvu 2016 dzakaonekwa pamwechete kakati wandei naAshanti achipinda mashoma emitambo yaHarden.
Harden akaberekerwa mumhuri ye5 tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri iyi.
Nezve baba vaHarden: James Harden Sr ndiye baba vemu basketball player. Akanga ari mugungwa wengarava uyo akapinda muchinodhaka uye akapedza nguva yakawanda muJeri. Nekudaro, akange achishaya kune chikamu chiri nani chehudiki hwaHarden.
Kunyangwe akazo ratidza kumitambo ye Harden yechikoro chesekondari, mutambi webhasikiti haana hanya nababa vake uye nanhasi, anoramba kushandisa Jr paanonyora zita rake.
Nezve Amai vaHarden: Monja Wills is Harden’s mother and the celebrated member of the family.
Zvakare zvakakosha zvikuru chisarudzo chake chokubatanidza vana vake mumitambo, chiito chakanga chisingabatsiri chete kuvadzivisa kubva mumatambudziko asi akaita kuti mhuri yake ive nezita rekufungidzira munyika yenyika
Akadaro Harden nezve kuyedza kwaamai vake kumuchengetedza zvine zvibereko
Nezve Harden's Siblings: Harden ine vanin'ina vaviri chete mukoma wekare anonzi Akili Roberson uye hanzvadzi yake inonzi Arnique Jelks.
Akili Roberson mutambi wemubhokisi uyo akanga ari nyota yevhesi yeInde High School muSouth LA asati apfuurira kutamba kuYunivhesiti yeKansas. Kune rumwe rutivi, zvishomanana zvinozivikanwa pamusoro pehanzvadzi yaJakobho Arnique Jelks
James Harden Biography – Untold Career Facts:
Harden yakave nebasa rinoshamisa rinoita basa rakaderera uye rakakwirira, kubva pakuva mutambi wokutanga munhoroondo yeNBA kugovera hutano hwe60 kukakata Lebron James mutsara, yekupedzisira ichiri kunzwika pamitambo yake yedare.
Isa zvakashata parutivi, Harden's yakasarudzika maitiro uye akasimba mutambo zvakamuita mumwe wevatambi veNBA vanotengesa zvakanyanya avo ane mvumo yakawanda inobata nemhando dzinosanganisira BBVA, Panini, NBA 2K, Stance uye New Era. Zvimwe zvinosanganisira zvibvumirano zvaakasaina neBeats, Foot Locker, State Farm, Electronic Arts, Trolli, BodyArmor neAdidas.
Harden ndeimwe yevatambi vashomanana muNBA vasina zviratidzo. Kunze kwebhasikiti iye anofarira mukukwira uye kutamba mitambo yemavhidhiyo.
Nezvemagariro ake evanhu, Harden haambofi anoshaya mukana wekuchengetedza neshamwari uye kutamba mifananidzo yezvakanaka nguva yaanogovana navo.
Iyewo mutendi anofuka chishongo chinoti: MuZita raJesu Ndinotamba. Kunyanya zvakadaro, akamboenda ku Twitter kuti aonge Mwari mushure mekuita chiitiko chinoshamisa chekugadzirisa zvinyorwa zvinyorwa zveHouston Rockets mu2013.
Akakomborerwa kuona 24. Ndinotenda Mwari pamusoro pezvose zvaakaita muupenyu hwangu. Zvose zvandinogona kuita ndezvekurarama.
- James Harden (@ JHarden13) August 26, 2013
Harden ari kurarama hupenyu hwekurota hwevakawanda aine imba inosvika mamirioni maviri emadhora mukati meRoyal Oaks Country Club kuHouston. Yakawedzerwa kune iyo imba ine dziva rekushambira muPalm Beach inodhura $ 2 mamirioni.
Vheji dzake dzinounganidza dzinoshandisa mabhiri maviri Rolls Royce Wraith, Bentley Bentayga uye yellow Chevrolet Camaro.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu James Harden Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!